Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana isticmaalaa kursiga curyaanka. Waxaan jeclahay in aan banaanka la baxo saaxiibadayda. Waxay igu dhahaan in aanan samayn karin wax galmo ah. Maadaama aan ahay qof ku socda kursiga curyaanka. Waxay dhahaan in aan anigu ahayn nin dabiici ah. Anigu ma hubi arintaasi. Run miyaa midaasi?
Du bist hier: Startseite / Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana isticmaalaa kursiga curyaanka....
Ma jiraan wax la yiraahdo nin “dabiici ah”.
Dadku waa kuwo kala duwan – nimanka iyo wiilashana waa sidaas oo kale.
Ninku wuxuu noqon karaa mid weyn ama mid yar.
Ninku wuxuu jeclaan karaa niman ama dumar.
Ninku wuxuu ku socon karaa kursiga curyaanka.
Nin kasta waa mid kaduwan midka kale.
Wax dhib ah malahan in aad ku socotid kursiga curyaanka.
Sidoo kale waxaa jira noocyo kala duwan oo galmo ah.
Galmada ninka iyo gabadha ay sameeyaan waa kaliya hal qaab oo galmada kamid ah.
Galmada ninka iyo gabadha ay sameeyaan waa marka uu xubinka taranka ninka uu galo xubinka taranka gabadha ama futada.
Sidoo kale waxaa jira qaabab kale oo baddan oo galmada loo sameeyo.
Waxa saxda ah waa waxa labada qofba ay ku faraxsanyihiin in ay wada sameeyaan.
Marka hore oggoow meesha aad jeceshahay in lagaa taabto.
Ugu sheeg gabadha saaxiibtaada ah ama wiilka saaxiibkaaga ah si daacad ah waxa aad jeceshahay.
Weydii asaga ama ayada waxa uu jecelyahay ama ay jeceshahay.
Si wada jir waxaad nafsadiina uga dhigi kartaan in aad si fiican dareentiin.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2018-09-28 11:17:232018-09-28 11:17:23Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana isticmaalaa kursiga curyaanka. Waxaan jeclahay in aan banaanka la baxo saaxiibadayda. Waxay igu dhahaan in aanan samayn karin wax galmo ah. Maadaama aan ahay qof ku socda kursiga curyaanka. Waxay dhahaan in aan anigu ahayn nin dabiici ah. Anigu ma hubi arintaasi. Run miyaa midaasi?